Idekhi enye – Ukukopa&Ukuqhawula – Iingcebiso ze-Android cheats
By ulawulo | EyeNkanga 28, 2021
“Njengoko besilindele kwiHandelabra, inguqulelo yedijithali ayinasiphako.” – UDavid Neumann, StatelyPlay.com
"I-Deck Dungeon enye ibonelela ngobutyebi bomdlalo onobuchule." – UChristian Valentin, AppSpy.com
"Umngxunya onzulu ngokumangalisayo onezigqibo ezibalulekileyo ekufuneka zenziwe ngalo lonke ixesha." – PixelatedCardboard.com
Iifowuni zokuzonwabisa… kodwa awusoloko unalo ixesha lokuchitha iiyure ulungiselela iphepha lomlinganiswa okanye ulawule uluhlu lwakho lwempahla! I-Deck Dungeon enye ikuvumela ukuba utsibe ungene ngqo ekubetheni iingcango, uqengqa idayisi, kunye ne-squashing baddies ngesitayela. Fumana amava omdlalo we-roguelike ngokupheleleyo, ibiliswe kwisiseko sayo, kwaye ubanjwe kumgangatho omnye wamakhadi kunye nesandla sedayisi!
I-Deck Dungeon enye ngumdlalo wokurhubuluza we-adventure womdlali omnye okanye ababini. Ngalo lonke ixesha udlala, khetha ibe nye okanye zibe mbini kwezi 6 amaqhawe akhaliphile:
• Mage – Kunqabile ukuba kubekho ingxaki emhadini angakwaziyo ukuyicombulula ngokupela.
• Umlo – Umsebenzi awuthandayo wentolongo kukubetha abachasi ngoko nangoko.
• Umkhohlakali – Bukela ngoloyiko njengoko ethumela izilo ezikhulu ngesimbo.
• Umtoli – Ichanekile, eqaqambileyo, ngokubulala ngentlekele.
• Paladin – Ufuna ingozi kwaye ukhusela amahlakani akhe kwiintshaba ezibulalayo.
• Inkungu – Le mage yolwaphulo-mthetho iwele ukusuka kwihlabathi le-Aeon's End ukunceda ukukhusela iMynerva. Funda ngakumbi kwi-AeonsEndDigital.com!
Emva komdlalo ngamnye, amaqhawe akho enze inkqubela ekuvuleleni ukuya 15 iitalente ezintsha, ukwakha amandla abo kwimidlalo ezayo.
Nazi 5 imingeni eyingozi ojongene nayo:
• Umqolomba weDragon – I-wyvern enesikhumba esishinyeneyo ehlala kulo mhadi ikhetha amaqhawe ayo kwicala elipholileyo.
• Yeti’s Cavern- Ukuba ungasinda kwimimoya eqhaqhazelisa amazinyo kunye nengqele eqhaqhazelis’ amazinyo, indoda yekhephu elizothe ilindele.
• I-Hydra’s Reef – Sika intloko enye, kuvele omnye! Le monstrosity inetyhefu evuselelayo lutshaba olutyibilikayo.
• Ingcwaba likaLich – Iqela leentshaba ezingafanga, iziqalekiso ezimbi, kunye neewadi zomlingo. Yintoni enokuthi ihambe kakubi?
• IMaze yeMinotaur – Lahla lonke ithemba, nina bangena apha!
Isiqulatho esingakumbi siyafumaneka nge-App Purchase:
Ukwandiswa kwehlathi leShadows kuphinda kabini umxholo kumdlalo. Ibonisa ama-adventure kuzo zonke iindawo ezintsha ezichumileyo kodwa ezibulalayo. Inethiwekhi enkulu yeetonela eziphantsi komhlaba kunye neendawo zehlathi ezidityanisiweyo zilindele amaqhawe akho!
• 5 amaqhawe amatsha – I-Alchemist, Druid, Umzingeli, Umbulali, & Umlindi
• 5 imigodi emitsha – Iqonga le-Indrax, I-Mudlands, Indawo yeVenom, Amabhodlo Aqhumayo, & Iingcambu ezimbi
• Idekhi entsha yokudibana yamakhadi angama-44
• Inkqubela phambili eyongezelelweyo igxininise, izakhono ezisisiseko, amayeza, & Kaninzi!
Ukwandiswa kobunzulu be-Abyssal yongeza uhlobo olutsha lwesisongelo: Abahlobo abakuzingelayo kulo lonke umzamo wakho wokufikelela kumphathi. Ibandakanya 6 IiFiends ezahlukeneyo, ngalinye linamanqanaba amabini obunzima. Ukongeza, 2 amaqhawe amatsha asemanzini ajoyina umlo kumanzi amdaka!
Amakhadi okwandisa umntu ngamnye:
• UCaliana – Le faerie ithathe isigqibo sokuba i-dungeoneering ibonakala imnandi! Ungamvumeli ukuba adikwe…
• Inzondelelo yempambano – Umlindi olilungisa ulapha ukuze abethe ububi naphi na apho bucatsha khona!
• Igqwirha – Isando sakhe somlingo esisisiphithiphithi silungele ukutyumza amajukujuku abe ngamadama ajingayo!
• AmaThafa eCinder – I-Hellhound ilindele abo bangenankathalo ngokwaneleyo ukuba bangene apha…
• Umngxuma wasePhoenix – Ngamagorha anesibindi kuphela anokumelana nobushushu!
Nje ukuba uyazi indlela yakho ejikeleze umhadi, umdlalo uthatha malunga 15 imizuzu. Kungathatha ixesha elide ukuba uyafunda, okanye mfutshane kakhulu ukuba utsibela emhadini wezikhonkwane.
Isilumkiso: musa ukutsibela emhadini wezikhonkwane.
Onke amakhadi kwiDekhi enye anebhokisi ezininzi ezinemibala. Roll idayisi lakho, kwaye uzame ukugcwalisa iibhokisi ezininzi kangangoko. Kuwo wonke umntu awugcwalisi, uya kuba neziphumo ezintliziyweni nangexesha! Nje ukuba ugqibe ukudibana uya kukwazi ukufunda isakhono esitsha, fumana into entsha, okanye ufumane amava okunyusa iqhawe lakho.
Wamkelekile kwihlabathi leDekhi enye. Uhambo lulindele!
Ifuna NEON CPU kunye 1 GB RAM.
I-One Deck Dungeon yimveliso enelayisensi esemthethweni "yeDekhi enye yeDungeon" evela kwiMidlalo ye-Asmadi.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, khangela OneDeckDigital.com
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Deck, Dungeon
← Itheyibhile yeDabi yeTennis – Ukukopa&Ukuqhawula Ixesha lokudlala lePoppy Huggy Wuggy – Ukukopa&Ukuqhawula →
Transformation 3D – Ukukopa&Ukuqhawula
Angry Birds Journey – Ukukopa&Ukuqhawula
Gunshot Run – Action Shooter Cheats&Ukuqhawula
Bankrupt Demon King – Ukukopa&Ukuqhawula
Huggy Escape Playtime – Ukukopa&Ukuqhawula
Box Simulator – Ukukopa&Ukuqhawula
456 Umdlalo wokusinda we-Imposter – Ukukopa&Ukuqhawula